ဘီအာရ် (ခင်အောင်အေး) | လမ်းအိုလေး
October 2, 2014 by lanolay	Leaveacomment
၂၀၁၃နဲ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ် နှစ်ခု ကူးပြောင်းစ ကာလတိုကလေးအတွင်းမှာ အဖြစ်အပျက်တချို့ဟာ ခပ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်၊ ဒါပေမဲ့ အတော်​​ပြင်းထန်တဲ့ ပေါက်ကွဲအားတွေနဲ့ ကိုယ့်ဘဝထဲ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ အဲဒီလို ဖြစ်ပျက်နေခဲ့စဉ် ကာလတို​​အတောအတွင်းမှာပဲ ဘီအာရ်​ကဗျာတွေကို ဖြစ်စဉ်နဲ့​ကိုက်ပြီး ရေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်မှာ စာတန်းထိုးသလို ထိုးရရင်တော့ Based on True Story ပေါ့လေ။ ကိုယ့်ကဗျာတွေက အဲ့ဒါထက်သာတဲ့ အချက်ကတော့ တကယ့်​​အဖြစ်အပျက်အပေါ်မှာ တကယ်​ခံစားရတဲ့အတိုင်း တကယ်​ထွက်ကျခဲ့တဲ့ စကားလုံး​အစစ်တွေဖြစ်တယ် ဆိုတာပါပဲ။ တကယ့် အဖြစ်အပျက်အပေါ်မှာ Base လုပ်ပြီးမှ ပြန်ပြုပြင် စီမံထားတာ တစ်ပုဒ်မှ မပါပါဘူး။ ဒီ ‘ဘီအာရ်’ ကဗျာစုမှာပါတဲ့ ကဗျာတွေ အားလုံးနီးပါးကို ရေးပြီးတိုင်း မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ဒါမှမဟုတ် အလွန်ဆုံး တစ်ရက်အကျော်မှာ သူ့(ဘီအာရ်)ဆီ အရောက် ပို့ပေးခဲ့မြဲဖြစ်ပြီး သူ(ဘီအာရ်) အချိန်နဲ့ တပြေးညီ ဖတ်ခဲ့ရတဲ့ ကဗျာတွေချည်းပါပဲ။ အဲဒီတုန်းက ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်တည်းသာ နားလည်တဲ့ ကိုယ်စားပြုနာမ်စား (အမ်န်-ဆက်ဒ်)လို့ သုံးခဲ့တယ်။ အဲဒီ Code Word ဟာလည်း သူ့ (လိမ္မာ​ပါးနပ်စွာ) ပြောစကားတစ်ခုက ကောက်နုတ်ယူခဲ့တာ ဖြစ်ပါရဲ့။
မင်း ဟိုဟိုဒီဒီ သွားရင်းနဲ့
မိုးရာသီ သစ်ပင်ပေါ်က စိမ်းရွက်မှောင်တွေလိုပဲ
မှားမှု၊ မှန်မှု နှစ်ဖက်လွန်ဆွဲပွဲမှာ
ကိုယ်တို့ အဖြေမထုတ်ဘဲ နေကြစို့
အဖြေမရှိတာ သေချာနေတဲ့ ခရီးဆီ
မင်းပြောသလို ဒီလိုပဲ အသာလေး ရွေ့ပလေ့စေ
အချစ်ကို မင်းဘယ်လို ရွဲကစားပြမလဲ
လတစ်စင်း … ဒါပဲ
if you come acrossared rose
while you’re out and about,
think of it as me
haven’t seen each other forawhile;
still think of you all the time;
like the gloomy dark leaves
of the rainy season,
blooms inasweep
on short-lived days;
of inexplicable meanings,
let’s live without answers;
hope to doze off forawhile
shall resume our serenade
in our next incarnation
onajourney that’s certain to offer no answer,
sings your blames to the sky
the struggle of our spirits that want to move on
cannot be subtracted
like you said, we’ll let it slip away
without leaning towards any direction;
to twist and fold my desire to understand
how will you juggle with affection?
with bated breath i watch your act
i’m your hardcore fan.
over the veranda
riseaman
English Translation: Kenneth Wong.
(ဘီအာရ် – ခင်အောင်အေး။ မေ – ၂၀၁၄။ ကျော်မွှေးစာပေ)
Categories: Kabyarz | Tags: ခင်အောင်အေး, BR, Kabyarz, Khin Aung Aye | Permalink.